Wararka Maanta: Axad, Oct 18, 2020-Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Canada oo soo dhoweeyay safiirka cusub ee Soomaaliya u magacowday Canada
Safiirka cusub oo lagu magacaabo, Xasan Daahir Dimbil ayaa noqonaya safiirkii ugu horeeyay ee Canada sanadihii ugu dambeeyay. Soomaaliya ayaa markii ugu dambeysay safiir u dirtay dalka Canada sanadkii 2014 xilligaas oo uu Maxamed Cabdi Maxamed (Gaandi) uu u magacaabay xilkaas madaxweynihii hore, Xasan Sheekh Maxamuud.
Dimbil oo ka soo jeeda magaalada Boorama ayaa horey u soo noqday wasiir ku xigeenka caafimaadka ee Somaliland.
Wuxuu qadka taleefanka kula hadlay HOL isagoo ku sugan hudheelkiisa wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu soo dhaweyn diiran kala kulmo jaaliyadda Soomaalida-Canada ee Ottawa.
Wuxuu intaas ku daray inuu rajeynayo inuu ka shaqeeyo xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Canada.